တစ်ခုခု စ လုပ်ဖို့ အခက်တွေ့နေပါသလား ? – Gentleman Magazine
တစ်ခုခု စ လုပ်ဖို့ အခက်တွေ့နေပါသလား ?
တဈခုခု စ လုပျဖို့ အခကျတှနေ့ပေါသလား ?
ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက် စာရွက်လွတ်တစ်ရွက်ကို ကိုင်ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ ကိစ္စလောက် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာ မရှိလောက်ပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုကို စလုပ်ချိန်ဟာ အခက်ခဲဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီး ထူးထူးခြားခြား စိတ်ဓာတ်စွမ်းအား ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ တစ်ခုခုကို စလုပ်ဖို့ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ကို မလုပ်ချင်အောင်ဆွဲထားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို နားလည်ပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ဆွဲခြင်းဟာ စောင့်ဆိုင်းခြင်းမဟုတ်သလို နှောင့်နှေးခြင်းထက် အကြောင်းဆိုးပါတယ်။ မလုပ်ဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခုခု စလုပ်ဖို့ကို နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေတတ်သူတွေအတွက် လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ဖြစ်သွားစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို စုစည်းထားပါတယ်။
စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ တုံ့ဆိုင်းနေခြင်းနောက်ကွယ်က ဦးနှောက်၏ သဘောသဘာဝ
ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းခံတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ခြောက်ပြစ်ကင်းပြီးပြည့်စုံချင်စိတ်၊ အချိန်ရဲ့ဖိအား၊ တစ်ဇွတ်ထိုးစိတ်၊ စီစဉ်စုဖွဲ့မှု မရှိခြင်း စတာတွေက သင့်အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ တစ်ခုခုစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းက တစ်ခုမကရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အလုပ်တစ်ခုရဲ့ ရလဒ်က ဝေးကွာနေတဲ့အခါမှာ လူမှုရေးကိစ္စတွေ၊ အပျော်အပါးကိစ္စတွေကို ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းပြီး အချိန်ရွှေ့ဆိုင်းတတ်တာက အဓိကတရားခံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်လွန်းခြင်း၊ ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုနောက်လိုက်ခြင်း စတာတွေကလည်း သင့်ကို တစ်ခုခုစမလုပ်ဖြစ်အောင် ဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
သင်စိတ်ကူးနိုင်ရင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တယ်လို့ Walt Disney က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Walt Disney အနေနဲ့ နာမည်ကျော်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်း Mickey Mouse ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ခဲ့ချိန်က စိတ်ကူးအိပ်မက်ထက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ပိုများခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရလည်း စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကို အတွေးလွန်နေတာကလည်း အမှန်တကယ်စတင်အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်ဖို့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကို ကြိုတင်ပုံဖော်တွေးတောထားတာက စိတ်အားတက်ကြွအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ မှန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စိတ်ကူးကသာ အရေးကြီးတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းတွေချည်းပဲထိုင်တွေးပြီး စိတ်ကူးနဲ့ရူးနေတာကတော့ ရှေ့မဆက်နိုင်စေမယ့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကို ထိုင်တွေးနေရုံတွေးမနေပဲ တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်လာအောင် လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်က အလုပ်များတာကို သဘောကျပါတယ်။ အီးမေးလ်တွေ အကုန်ဖတ်ထားပြီးမှ၊ စားပွဲပေါ်က စာရွက်တွေ စီစီရီရီရှင်းထားပြီးမှ စသဖြင့် လုပ်စရာတွေ များနေတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် တစ်ခုခုလုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကို လိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့အများစုက တကယ်စလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ရှောင်လွှဲဖို့အတွက် အခြားမလိုတာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်စာရင်းရှည်ကြီး ချရေးနေမယ့်အစား မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အရေးကြီးအလုပ်(၃)ခုလောက်ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်အောင်မြင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပြီး နေ့တိုင်းလုပ်ရမယ့် အလုပ်(၃)ခုကို စာရင်းပြုစုပြီး အရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ။
အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ နောက်ကျသွားတဲ့အခါမှာ အရမ်းနောက်ကျနေပြီးမလုပ်သင့်တော့ဘူးလို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း အဓိကအချက်က ဘာလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ပါ။ နောက်ကျနေတာမှန်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး လုပ်စရာရှိတာကို စလုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ တစ်ခုခုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့အချိန်ကောင်း ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျလွန်းနေပြီဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ကို သင်တွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ပါ။
ကြှနျတျောတို့အမြားစုအတှကျ စာရှကျလှတျတဈရှကျကို ကိုငျပွီး ဘာလုပျရမှနျးမသိတဲ့ ကိစ်စလောကျ စိတျပကျြစရာကောငျးတာ မရှိလောကျပါဘူး။ အလုပျတဈခုကို စလုပျခြိနျဟာ အခကျခဲဆုံးအခြိနျဖွဈပွီး ထူးထူးခွားခွား စိတျဓာတျစှမျးအား ရှိနဖေို့လိုပါတယျ။ တကယျတော့ တဈခုခုကို စလုပျဖို့ဆိုတာက ကြှနျတျောတို့ကို မလုပျခငျြအောငျဆှဲထားတဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအခကျြအလကျတှကေို နားလညျပွီး ကြျောဖွတျနိုငျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အခြိနျဆှဲခွငျးဟာ စောငျ့ဆိုငျးခွငျးမဟုတျသလို နှောငျ့နှေးခွငျးထကျ အကွောငျးဆိုးပါတယျ။ မလုပျဖို့အတှကျ ဆုံးဖွတျလိုကျတာပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ တဈခုခု စလုပျဖို့ကို နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာနတေတျသူတှအေတှကျ လုပျခငျြတာတှလေုပျဖွဈသှားစဖေို့ သိထားသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို စုစညျးထားပါတယျ။
စတငျလုပျဆောငျဖို့ တုံ့ဆိုငျးနခွေငျးနောကျကှယျက ဦးနှောကျ၏ သဘောသဘာဝ
ကြှနျတျောတို့တဈဦးခငျြး တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးမှာ စိတျရှုပျစရာဖွဈစတေဲ့အကွောငျးရငျးခံတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ ခွောကျပွဈကငျးပွီးပွညျ့စုံခငျြစိတျ၊ အခြိနျရဲ့ဖိအား၊ တဈဇှတျထိုးစိတျ၊ စီစဉျစုဖှဲ့မှု မရှိခွငျး စတာတှကေ သငျ့အတှကျ အဆိပျအတောကျဖွဈစပေါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ တဈခုခုစတငျလုပျဆောငျဖို့ နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာစတေဲ့ အကွောငျးရငျးက တဈခုမကရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့ အလုပျတဈခုရဲ့ ရလဒျက ဝေးကှာနတေဲ့အခါမှာ လူမှုရေးကိစ်စတှေ၊ အပြျောအပါးကိစ်စတှကေို ဆနျ့ကငျြနိုငျစှမျး လြော့နညျးပွီး အခြိနျရှဆေို့ငျးတတျတာက အဓိကတရားခံဖွဈနတေတျပါတယျ။ မိမိကိုယျကို စောငျ့ကွညျ့ထိနျးခြုပျလှနျးခွငျး၊ ယောငျခွောကျဆယျဖွဈခွငျး၊ စိတျခံစားမှုနောကျလိုကျခွငျး စတာတှကေလညျး သငျ့ကို တဈခုခုစမလုပျဖွဈအောငျ ဟနျ့တားနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
သငျစိတျကူးနိုငျရငျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျတယျလို့ Walt Disney က ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Walt Disney အနနေဲ့ နာမညျကြျောကာတှနျးဇာတျကောငျး Mickey Mouse ကို စိတျကူးပုံဖျောခဲ့ခြိနျက စိတျကူးအိပျမကျထကျ လကျတှလေု့ပျဆောငျခကျြတှကေ ပိုမြားခဲ့ပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရလညျး စိတျကူးကောငျးတဈခုကို အတှေးလှနျနတောကလညျး အမှနျတကယျစတငျအကောငျအထညျဖျော လုပျဆောငျဖို့ နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အနာဂတျကို ကွိုတငျပုံဖျောတှေးတောထားတာက စိတျအားတကျကွှအောငျလှုံ့ဆျောပေးနိုငျတယျဆိုတာကတော့ မှနျပါတယျ။ တကယျတော့ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ စိတျကူးကသာ အရေးကွီးတဲ့ လှုံ့ဆျောမှုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကောငျးတှခေညျြးပဲထိုငျတှေးပွီး စိတျကူးနဲ့ရူးနတောကတော့ ရှမေ့ဆကျနိုငျစမေယျ့ အကွောငျးရငျးတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျကူးကောငျးတဈခုကို ထိုငျတှေးနရေုံတှေးမနပေဲ တကယျအကောငျအထညျပျေါလာအောငျ လုပျစရာရှိတာတှကေို လုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးနှောကျက အလုပျမြားတာကို သဘောကပြါတယျ။ အီးမေးလျတှေ အကုနျဖတျထားပွီးမှ၊ စားပှဲပျေါက စာရှကျတှေ စီစီရီရီရှငျးထားပွီးမှ စသဖွငျ့ လုပျစရာတှေ မြားနတောကိုနှဈသကျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ တဈခုခုလုပျပွီးသှားတယျဆိုတာမြိုးကို လိုခငျြလို့ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကြှနျတျောတို့အမြားစုက တကယျစလုပျဖို့လိုအပျနတေဲ့အလုပျကို ရှောငျလှဲဖို့အတှကျ အခွားမလိုတာတှနေဲ့ အလုပျရှုပျနတေတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တဈနတေ့ာလုပျဆောငျရမယျ့အလုပျစာရငျးရှညျကွီး ခရြေးနမေယျ့အစား မဖွဈမနလေုပျရမယျ့အရေးကွီးအလုပျ(၃)ခုလောကျကို ဦးစားပေးလုပျဆောငျတတျဖို့ လိုပါတယျ။ သငျ့အောငျမွငျမှုအပျေါ သကျရောကျမှုရှိပွီး နတေို့ငျးလုပျရမယျ့ အလုပျ(၃)ခုကို စာရငျးပွုစုပွီး အရငျဆုံးလုပျဆောငျပါ။
အလုပျတဈခုခုလုပျဖို့ နောကျကသြှားတဲ့အခါမှာ အရမျးနောကျကနြပွေီးမလုပျသငျ့တော့ဘူးလို့ ခံစားရတတျပါတယျ။ တကယျတမျး အဓိကအခကျြက ဘာလဲ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမေးကွညျ့ပါ။ နောကျကနြတောမှနျပမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ခှငျ့လှတျပွီး လုပျစရာရှိတာကို စလုပျနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ ဘယျသူမှ ပွီးပွညျ့စုံတယျဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ပွီးတော့ တဈခုခုကိုစတငျလုပျဆောငျဖို့ မှနျကနျသငျ့တျောတဲ့အခြိနျကောငျး ဆိုတာလညျး မရှိပါဘူး။ ဘယျတော့မှ နောကျကလြှနျးနပွေီဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ရဲ့အားနညျးခကျြကို သငျတှရှေိ့မယျဆိုရငျ ခှငျ့လှတျပွီး လုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျပါ။
Previous: ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်စိတ်ဝင်စေတဲ့ နည်းနာ ၇ ခု
Next: Relationshipတစ်ခုအတွက် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပြသာနာ(၇)ခု